Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve ထုတ်ကုန်များ)
Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် electromagnetic Pneumatic Valve
tag ကို: electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve , Pulse ဂျက် Electromagnetic Pneumatic Valve , rectangular Pulse ဂျက်မြှေး Valve
လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏ကို Maintenance: လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အမိန့်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါကအချိန်အတွက်ဖျက်သိမ်းရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အညစ်အကြေး, အစိုဓာတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံခြားတ္ထုများအချိန်အတွက်ရှင်းလင်းရပါမည်။...
tag ကို: ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် Pneumatic Valve , ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် electromagnetic Pneumatic Valve , စက်မှု Pulse ဂျက်မြှေး Valve
electromagnetic သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အဆိုပါလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်လျှပ်စစ်သံလိုက်သို့မဟုတ် pneumatic ရှေ့ပြေးအဆို့ရှင်ကထိန်းချုပ်ထားသည်, ချက်ချင်းတစ် pulsing မြှေးအဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အနှစ်ချုပ်: electromagnetic...
XLD-B ကအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ် Valve
tag ကို: XLD-B ကအမျိုးအစား Stellate Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve , XLD-B ကလျှပ်စစ် discharge , YJD-တစ်ဦးကစတားအမျိုးအစား discharge
အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ သာမန်အမျိုးအစား, ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်အမျိုးအစားနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်အမျိုးအစား: ရိနာစွဲသုံးအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ အဆိုပါချစဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်မှုနှုန်းသည်နှင့်အညီပစ္စည်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်,...
YJD တစ်ဦးကအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ် Valve
tag ကို: YJD တစ်ဦးကလှုံ့ဆျောကြှေးမှေး , YJD-B ကစတားအမျိုးအစား discharge , YJD-တစ်ဦးကလျှပ်စစ် discharge
သီးခြားထင်ရှားသော (1) ကို discharge အတူတူဝင်ရိုးပေါ်ဂြိုဟ်လည်ပတ်, input ကိုနှင့် output ကို၏နိယာမချမှတ်လျက်, မော်တာနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု၏ထူးခြားမှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာအလေးချိန်အတွက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလငျး၌လှပတ္ထု,...
YJD-B ကအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ် Valve
tag ကို: YJD-B ကလှုံ့ဆျောကြှေးမှေး , YJD-B ကလျှပ်စစ် discharge , Stellate Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve
ကြယ်ပွင့် type ကို discharge အထူးချကိရိယာများသည်အတိုင်း, ကြယ်ပွင့် type ကိုချသန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး၌ကြီးစွာသောအခန်းကဏ္ဍ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပိုကောင်းနားလည်ထိန်းသိမ်းနည်းတစ်ခု All-ပတ်ပတ်လည်လမ်းများတွင်ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချခြင်း,...
ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား discharge Valve
tag ကို: မြင့်မားသောအပူချိန် Rotary Valve , Lock ကို Valve လှည့် , ကြယ်ပွင့်ပုံသွင်းကြှေးမှေး
အမြိုးခှဲခွားခွငျး သာမန်အမျိုးအစား, ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်အမျိုးအစားနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်အမျိုးအစား: စတားအမျိုးအစား discharge သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်အမျိုးအစား: ကကျယ်ပြန့်စုတ်ယူခြင်း, ဖိအား Airflow...
တံဆိပ်ခတ် discharge Valve ကွန်ပ exhaust Valve
tag ကို: cinder Rotary Valve , Air ကိုကွန်ပ Valve အားကုန်ဘွေ , မိုးသည်းထန်စွာစက်မှု Rotary Valve
အဆိုပါကြယ်ပွင့်ချ device ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး, လေထောက်ပံ့ရေးနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများနို့တိုက်ကျွေးရေးအတှကျအဓိကပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်ပြီး, ကြယ်ကို discharge မှုန့ပစ္စည်းများနှင့်တောင့်ပစ္စည်းအဘို့သင့်လျော်သည်။...
မိုးသည်းထန်စွာ Duty Rotary discharge Valve ပေါ်မှပစ္စည်းများချ
tag ကို: Rotary Valve Valve ပေါ်မှပစ္စည်းများချချ , Air ကိုကွန်ပဖုန် Valve အားကုန် , လမ်းခွဲစတား Valve Valve
ဘုံပြတ်ရွေ့ ပထမဦးစွာကြယ်အမျိုးအစား discharge, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းတည်ငြိမ်ဖြစ်တိုက်မှုမှရှောင်ရှားတိုင်အောင်, shell ကိုခြိုးဖောကျနဲ့ပုံပျက်သောစေသင့်ပါတယ်။...
Rotary Valve / ချ Valve
tag ကို: Valve / Rotary Valve ပေါ်မှပစ္စည်းများချ , Stellate ကယ်ဆယ်ရေး Valve လှည့် , Rotary Air ကိုဘရိတ်ကြှေးမှေး
စက်စက်ရုံထွက်ခွာခြင်းမပြုမီလျှော့ချအတွက်ချောရေနံအမှတ်0င်အမဲဆီဖြည့်စွက်ထားသည်။ ရိနာစွဲအဆို့ရှင်လီသီယမ်အခြေစိုက်စခန်းအမဲဆီနှင့်ပြည့်စုံပြီ။ စစ်ဆင်ရေးအပြီး 6-10 လအတွင်း, ထိုဂီယာနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆောင်သောဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်အစားထိုးသင့်ပါတယ်။...
type DN300 Pulverized Valve Rotate Valve
tag ကို: High Quality အပူခံနိုင်ရည် Rotary Valve ကြှေးမှေး , မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန် Rotary ဖုန်ကောက်ခံရေး Valve , ဘိလပ်မြေ၏ Rotary Valve
အဆိုပါချအဆိုပါကျီတစ်ခု၏ရိနာစွဲ device ကိုအတိုင်းပစ္စည်းသည့်စနစ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမကြာခဏမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားမှုစနစ်အတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး system အတွက်အရေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများထဲကတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။...
ကြယ်ပွင့်ကိုဖျက်ထုတ် Valve ချ
tag ကို: ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား discharge စျေး , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချကော်-4 , ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာပစ္စည်းများ
ကြယ်ပွင့် type ကို discharge ၏ရွေးချယ်ရေးမသာပစ္စည်း၏အရွယ်အစားနှင့်သိပ်သည်းဆသဘောသဘာဝအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒါပေမယ့်လည်းအပူချိန်ကွဲပြားခြားနားသောအခါကွဲပြားခြားနားသောဥတုကိုရွေးချယ်ရပါမည်။...
DCF-4 Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: DCF-4 Solenoid Valve စျေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse Valve , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve
သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမ: အဆိုပါ solenoid valve ၏ကွိုင် wire ကိုမှတဆင့်ရှေ့ကိုသွေးခုန်နှုန်း signal ကိုသို့ input ကိုဖြစ်ပြီး, ကွိုင်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ် flux ရွေ့လျား core...
DMF-Z-50s Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: DMF-Z ကို-40 Electromagnetic Pulse Valve , DMF-Z-40 Electromagnetic Pulse Valve , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Solenoid Valve
အသေးစားအဆက်မပြတ် Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: DSF-80-TS Electromagnetic Pulse Valve , DSF-80-XS Electromagnetic Pulse Valve , ဘက်ပေါင်းစုံ Electromagnetic Pulse Valve
အထွေထွေ solenoid အဆို့ရှင်သာပွင့်လင်းသောကြောင့်ထိုသူနှစ်ယောက်ပြည်နယ်ပိတ်ဖို့, များစွာသောလည်းဟက်တာသာ solenoid valve ဟာအဆက်မပြတ်ကိုပြောင်းကြကုန်အံ့, ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားစီးဆင်းမှု, အလတ်စား, အသေးစားအဖြစ်, ပြည်နယ်အမျိုးမျိုးလိုအပ်ပါတယ်!...
လက်မ Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: တဦးတည်းလက်မနှင့်တစ်ဝက် Solenoid Valve , DCF-4 Differential Valve , ခြောက်လ Dedusting Pulse Valve
အဆိုပါ solenoid valve ဟာကြီးမားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ကိုခေါ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တဦးတည်းအချိန်အားဖြင့်အဆို့ရှင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။...
နစ်မြုပ်နှင့် Dedusting Solenoid Valve
tag ကို: သုံးလက်မ Electromagnetic Pulse Valve , နှစ်ဦးကိုလက်မ Electromagnetic Pulse Valve , နှစ်ဦးကိုလက်မနှင့်တစ်ဝက် Solenoid Valve
အဆိုပါ solenoid valve ဟာစားသုံးမှုလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်နှင့်စားသုံးမှု solenoid valve သို့ခွဲခြားထားတယ်။ တကယ်တော့, နိယာမအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အလတ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ solenoid valve ဟာကြီးမားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။...
တိုက်ရိုက် Angle Dedusting Solenoid Valve
tag ကို: Submersed Pulse Solenoid Valve စီးရီး , တိုက်ရိုက် Angle Dedusting Pulse Valve , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve စီးရီး
သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း signal ကို wire ကိုမှတဆင့် solenoid valve ၏ကွိုင်သို့ input ကိုဖြစ်ပြီး, သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ဟာသွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုတူရိယာ၏ output signal ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။...
ညာဘက်ထောင့် solenoid valve
tag ကို: နစ်မြုပ် Pulse Valve , DMF-Z ကို-20 Pulse Valve , DMF-Z ကို-25 Pulse Valve
အဓိပ္ပာယ်: အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာကိုလည်းမြှေးအဆို့ရှင် 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဒါဟာဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏မှုတ်မှုစနစ်အတွက်ချုံ့ဝေဟင်၏ "switch ကို" ဖြစ်ပါတယ်။...
DMF-Z-70 ညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve
tag ကို: DMC-Z-70 အမျိုးအစား Electromagnetic Pulse Valve , စက်မှု DMC-Z-50s Solenoid Valve , DMF-Z ကို-40 Pulse Valve
အလုပ်လုပ်နိယာမ: အဆိုပါ solenoid valve ၏ကွိုင် wire ကိုမှတဆင့်ရှေ့ကိုသွေးခုန်နှုန်း signal ကိုသို့ input ကိုဖြစ်ပြီး, ကွိုင်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ် flux ရွေ့လျား core ကိုအတွက်ဆွဲထုတ်နှင့်အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။...
တိုက်ရိုက် Pass ကို Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: Solenoid Valve ၏ဈေးနှုန်း , Pulse Valve ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , Pulse Valve ၏ဈေးနှုန်း
သုံးပါ: ယင်းထုတ်လွှင့်အလိုအလျှောက်ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်လျှော့ချသောအခါများသောအားဖြင့်အဓိကရေနံလမ်းဒါမှမဟုတ်ထိတ်လန့်ကိုစုပ်ယူပြန်ဖိအားရေနံလမ်းထဲမှာ installed, ရေနံဖိအားကျဆင်းသွားခြင်းသို့မဟုတ်အခါသော့ခတ် stop...
Solenoid Valve ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှစ်ဦးကိုလက်မဖုန်
tag ကို: QMFD-20P-တစ်ဦးပေါင်းစည်း Pulse Valve , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings Pulse Valve , Deduster ဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်း
effect: ဒါဟာရေနံလမ်း၌ပါသောဆီဖိအား၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်ထားရှိမည်ကြောင်းဒါပြောင်းကုန်ပြီနှင့်သော့ခတ်,...
KXD-1 / KXD-II ကို Electromagnetic Pulse Valve
tag ကို: ညာဘက်ထောင့် Electromagnetic Pulse Valve , နစ်မြုပ် Dedusting Solenoid Valve , Valve ချိတ်ဆက်ခြင်း DMF-ZM-25 မြန်နှုန်း
1, solenoid အဆို့ရှင်သာအတော်လေးအရည် emitting လျက်ရှိ၏ သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တစ်ဦးသိုလှောင်မှုလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုရှိပါတယ်။ 2, လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် (Electromagnetic အဆို့ရှင်)...
Electromagnetic Pulse Valve အမျိုးအစား
tag ကို: Electromagnetic Pulse Valve ၏နိယာမ , Pulse Solenoid Valve ၏ဘဝ , Pulse Solenoid Valve ၏နိယာမ
လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်လျှပ်စစ်သံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရည်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုအလိုအလျောက်အခြေခံဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ actuator ပိုင်နှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် pneumatic ဖို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။...
ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် electromagnetic Pneumatic Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
electromagnetic pneumatic solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
XLD-B ကအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ် Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
YJD တစ်ဦးကအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ် Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
YJD-B ကအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ် Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား discharge Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံဆိပ်ခတ် discharge Valve ကွန်ပ exhaust Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မိုးသည်းထန်စွာ Duty Rotary discharge Valve ပေါ်မှပစ္စည်းများချ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rotary Valve / ချ Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
type DN300 Pulverized Valve Rotate Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြယ်ပွင့်ကိုဖျက်ထုတ် Valve ချ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DCF-4 Electromagnetic Pulse Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DMF-Z-50s Electromagnetic Pulse Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစားအဆက်မပြတ် Electromagnetic Pulse Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်မ Electromagnetic Pulse Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နစ်မြုပ်နှင့် Dedusting Solenoid Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိုက်ရိုက် Angle Dedusting Solenoid Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညာဘက်ထောင့် solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DMF-Z-70 ညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိုက်ရိုက် Pass ကို Electromagnetic Pulse Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Solenoid Valve ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှစ်ဦးကိုလက်မဖုန် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
KXD-1 / KXD-II ကို Electromagnetic Pulse Valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Electromagnetic Pulse Valve အမျိုးအစား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve from China, Need to find cheap Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Electromagnetic Pneumatic Solenoid Valve, We'll reply you in fastest.